Ireo Bilaogera Eveka Any Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2017 2:14 GMT
Mpikatroka Kristianina manohitra ny filokana sy ny kolikoly eo amin'ny fiarahamonina ny Arseveka Oscar Cruz avy any avaratr'i Filipina, amin'ny alàlan'ny bilaoginy, Viewpoints. Amin'ny maha mpitsikera azy tsy mitsahatra ny fitondrana ankehitriny, dia lasa mpitondra ny feon'ireo mpanohitra izy. Nanameloka ny fanentanana faikany manohitra ny fahantrana ataon'ny governemanta izy tao amin'ny bilaoginy farany.
Reflections no bilaogin'ny Arseveka Angel Lagdameo, ny lehiben'ny Fihaonamben'ny Eveka Katolika tena matanjaka ao Filipina. Tao amin'ny bilaogin-dahatsorany vao haingana, niaro ny fanapahan-kevitry ny pretra sasany izy izay nanampy ny miaramila mpikomy .
Mamahana bilaogy amin'ny alàlan'ny Dialogues ny Arseveka Fernando Capalla ao atsimon'i Filipina . Pastoral Companion no blaogin'ny Eveka Antonio Ledesma. Bilaogera ihany koa ny Arseveka Orlando Quevedo amin'ny alalan'ny Perspectives.
The Meaning indray dia an'ny Eveka Jose Manguiran. Araka ny voalazan'ny bilaogera Eveka, “Rehefa manomboka sy mifarana miaraka amin'i Kristy ihany ny fiainana no misy dikany “.
Tidbits no bilaogin'ny Eveka Leonardo Medroso. Nidera ny laika tao amin'ny bilaogin-dahatsoratra iray izy ary nitantara ny fomba hanamafisan'ny Fiangonana ny heriny eo amin'ny fiarahamonina: